क्यूमो (फुझौ) इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
QOMO एक अग्रणी अमेरिकी ब्रान्ड र शैक्षिक र कर्पोरेट प्रस्तुति टेक्नोलोजीको ग्लोबल निर्माता हो। कागजात क्यामहरूदेखि अन्तर्क्रियात्मक टच स्क्रिनहरूमा, हामी केवल पार्टनरहरू हौं जुन पूर्ण एकीकृत (र अनुकूलनीय) उत्पादन लाइनको साथ आउँदछ जुन प्रयोग गर्न सजिलो र बजेटमा सजिलो छ। करीव २० बर्षदेखि यो गरेपछि, हामी कसरी काम गर्ने भन्ने बुझ्दछौं। सीईओ र सीटीओ देखि जिल्ला प्रशासकहरू र कक्षा को शिक्षकहरू सबैको साथ। QOMO ले सबै भन्दा राम्रो, बुझ्दो समाधानहरू ल्याउँदछ जसले सबैलाई मद्दत गर्दछ कि उनीहरूले उत्तम रूपमा के गर्दछन्।
क्युमो सम्पूर्ण विश्वमा शिक्षाको गुणस्तर र कार्य क्षमता सुधार गर्न प्रतिबद्ध छन्। हामी तपाईंलाई एक सरल, सबैभन्दा बुझिलो समाधान प्रदान गर्नेछौं जसले तपाईंलाई केमा रमाईलो गर्न मद्दत गर्दछ।
र Q शिक्षा स्मार्ट इलेक्ट्रोनिक उपकरणको साथ सबै शिक्षा संसाधनहरू रमाईलोको साथ कनेक्ट गर्नुहोस्।
किन Qomo छनौट?
हाम्रो आर एण्ड डी टीम टेक्निसियनहरूसँग मिलेर बनेको छ जसको हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा दशक भन्दा बढीको अनुभव छ। प्रत्येक सीजन हामी बजार मागहरू पूरा गर्नका लागि हाम्रा उत्पादनहरू स्तरवृद्धि गर्न ग्राहकको प्रतिक्रिया र मार्केट आवश्यकता संकलन गर्नेछौं। हाम्रो लक्ष्य सबै भन्दा बढि आर्थिक लागत र उत्तम गुणको साथ चलाखीपूर्ण उत्पादनहरूको विकास गर्ने हो!
तपाईंको बजेटको साथ OEM / ODM स्वीकार्नुहोस्
एक निर्माताको रूपमा, हामी OEM र ODM स्वीकार गर्दछौं जुन तपाईंको लक्ष्य र बजार पूरा गर्दछ। तपाईं निश्चित रूपमा आफ्नो सफ्टवेयरको साथ एकीकृत गर्न हाम्रो स्मार्ट इलेक्ट्रोनिक उपकरण हार्डवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र क्युमोले स्मार्ट कक्षाकोठाको लागि उत्तम समाधान प्रदान गर्दछ। विद्यार्थीहरूलाई लाज बिना क्लासमा भाग लिन सजिलो बनाउनुहोस्।
क्युमोको स्मार्ट उत्पादनहरूले तपाईंलाई सिकाउन, कुराकानी गर्न र सहयोग गर्न तपाईंलाई बढी सोच्न र प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्दछ जुन तपाईंले सोचेको भन्दा बढी छ। जब तपाइँ क्मोमोलाई तपाइँको आपूर्तिकर्ताका रूपमा छनौट गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, हामी तपाइँलाई गाइड र समर्थन प्रयोगको पूर्ण सेवा प्रदान गर्नेछौं।
र प्रत्येक वर्ष, हामी ISE / Infocomn मा भाग लिने छौं। तपाईं हाम्रो उत्पादनहरू सजिलैसँग जाँच्न सक्षम हुनुहुन्छ पनि तपाईंले हाम्रो कारखानाको भ्रमण गर्नुभएन।